Kusarudzika padiki Ehupfumi Zvemari
Kune vanhu vari kutya zera rekurega basa. Kubva pakuva nebasa rekumuka kwezuva rega rega, uye zvakare kunzwa unobatsira; Kuva munhu ari pamudyandigere nenguva yakawanda yemahara inovashungurudza, nekuti vanonzwa kuti, kana vachizviwana vari mumamiriro ezvinhu, vanorega kushandira, kwete chete nzanga, asiwo yemhuri yavo. Ndicho chikonzero nei vazhinji vachifunga kutora chikamu mukutora basa.
Asi, Chii chinorehwa nekusiya pamudyandigere? Pane chero munhu anogona kuwana iyo? Ndezvipi zvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa? Inogona kugara ichichengetwa here? Zvese izvi uye zvimwe zvakawanda ndizvo zvaticha taura nezvazvo zvinotevera.
1 Chii chinonzi kukwana pamudyandigere
2 Mhando dzekusiya pamudyandigere
3 Ndezvipi zvinodiwa zvinonzi nedeed kuzadzisa
3.1 Kurega pamudyandigere nechibvumirano chekuyamura
3.2 Kusarura zvishoma pasina kontrakiti yekutsiva
4 Yakawanda zvakadii inobhadhariswa neeparty retirement
5 Maitiro ekunyorera ekurega chikamu
Chii chinonzi kukwana pamudyandigere
Kurega pamudyandigere kunogona kunzwisiswa sechibvumirano chinoitwa pakati pemushandirwi nemushandi icho munhu iyeye achideredza maawa avo ekushanda nekambani, pamwe nekuderera kwayo muhoro. Zvinoenderana neSocial Security peji, iyo pfungwa yekurega mudhara ichave inotevera:
«Kurega pamudyandigere kunofungidzirwa kuve kwakatanga mushure mekusvitsa makore makumi matanhatu, panguva imwe chete nechibvumirano chebasa renguva isina kuzara uye chakabatanidzwa kana kwete chibvumirano chekuyamura chakasainwa nemushandi asingashandi kana ane chibvumirano nekambani yenguva yakatarwa" .
Mune mamwe mazwi, ndeye iyo iyo munhu anoramba achishanda asi achizviita nezuva rakapfupika rekushanda, pamwe nemubhadharo wakaderera. Nekudaro, hazvireve kuti iwe uchachaja zvishoma. Muchokwadi, iye aizogamuchira chikamu chakaringana chepenjeni yake yekurega basa kubva kuSocial Security.
Kuti basa rekurega basa riitwe, zvinodikanwa kuti kudzikiswa kwezuva rekushanda kuve neinosvika makumi maviri neshanu muzana, uye inogona kusvika pakakwirira kusvika pa25%. Uye zvinoreva kusainwa kwechibvumirano chitsva chebasa.
Mhando dzekusiya pamudyandigere
Chimwe chinhu chisingazivikanwe nevakawanda ndechekuti pane nzira mbiri dzekukodzera kuwana pamudyandigere. Izvi ndeizvi:
Pakutanga pamudyandigere. Zvinoitika kana mushandi achifambira zera rekurega basa pasina chirango. Izvo zvazvinoita kudzikisira zuva rekushanda asi, pachinzvimbo chekuzviwanira pachayo chibvumirano chakasarudzika (kuwanisa zvimwe zvese nepenjeni), zvazvinosimbisa chibvumirano chekuyamura.
Kazhinji zvekurega basa. Ndiyo iyo iyo, kana zera rakakodzera rasvikwa kutora mukana wechiitiko ichi, mushandi anotora mukana nazvo nekuderedza muhoro nemaawa ekushanda mukutsinhana nekutora chikamu chekurega kwavo basa.
Ndezvipi zvinodiwa zvinonzi nedeed kuzadzisa
Kana mushandi achida kutora mukana wechiyero ichi, nhevedzano yezvinodiwa zvinofanirwa kutanga zvasangana, senge:
Kurega pamudyandigere nechibvumirano chekuyamura
Iyo ingave iri yekutanga fomu yekusarudzika pamudyandigere yatakakurukura, uye mune ino kesi, kuti tigone kunakidzwa nayo zvinotevera zvinofanirwa kuzadzikiswa:
Kuti pane chibvumirano chekuyamura nemushandi akasunungurwa. Iyi kondirakiti inogona kunge iri yezuva iro mushandi akasunungurwa aisazoshanda, uye inogona kunge iri yenguva pfupi kana isingagumi.
Kuti iwe wasvitsa pazera zera rekusarudzika pamudyandigere. Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezve makore makumi matanhatu mune nyaya yevanowirirana; 60-62 mune dzimwe dzese kesi.
Iva nechibvumirano chenguva yakazara. Kana ikasawanika, mushandi haazokwanisi kusarudza fomula iyi yekurega basa.
Izvo zvinodikanwa kuti mushandi ave nehukuru hweanenge makore matanhatu mukambani. Kana ikasazadzikiswa, kunyangwe kana uine zvimwe zvinodiwa, haugone kuwana iyi fomu yekurega basa.
Kusarura zvishoma pasina kontrakiti yekutsiva
Muchiitiko chekuti chibvumirano chekutsiva chisina kuitwa, uye sarudza pamudyandigere wakasarudzika, izvo zvinodiwa kuti zviitike ndeizvi:
Zera repasi rekusiya basa, rinozobva pamakore makumi matanhatu.
Chibvumirano chebasa. Izvi zvinogona kuve zvese zvenguva yakazara uye chikamu-chenguva.
Kuderedzwa kwezuva rekushanda. Iko kudzikisira kunofanirwa kuve kushoma kwe25% uye yakakwira ye50%. Mune zvimwe zviitiko, 75% inogona kubvumidzwa.
Iva nenguva shoma yekupa. Iyi nguva ichave makore gumi nemashanu, maviri acho pakarepo mukati memakore gumi neshanu chiitiko chechiitiko chisati chaitika. Ndokunge, maviri emakore iwayo anofanirwa kunge ari mukati memakore gumi neshanu nguva iyoyo isati yasvika.
Pinda muchibvumirano chenguva-pfupi nekambani. Kunyangwe iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine chibvumirano chebasa, kana uchienda kubva kuzere kusvika pazuva rakadzikiswa zvakakosha kuti uite chibvumirano chitsva
Yakawanda zvakadii inobhadhariswa neeparty retirement
Mune ino kesi hatigone kukupa iyo chaiyo huwandu kubvira Zvinoenderana nepenjeni inoenderana newe. Izvo zvinofanirwa kujekerwa kwauri ndezvekuti pamwe nekusiya pamudyandigere iwe uri kuzobhadharwa zvishoma nekambani, uye zvimwe zvese kusvika pakupera kwezuva zvichabhadharwa neSocial Security semudyandigere.
Maitiro ekunyorera ekurega chikamu
Kana mushure mezvawakaverenga iwe uchifunga kuti unozadzisa zvinodiwa uye zvakare chiri chinhu chaungade kuita, maitiro ekukumbira pasiti yekurega basa, kutanga, nekukumbira kusangana pamberi peSocial Security. Izvi zvinogona kuwanikwa nekufonera iyo nhamba yefoni (901 106 570), kuburikidza newebsite yayo kana kuburikidza neapp yayo. Iyi musangano inokutendera iwe kuti uwane zvese zvaunoda kuti uzive nezve chikamu chekurega basa.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuve nemagwaro akagadzirirwa, ndokuti: DNI kana NIE (yekutanga uye kopi), fomu rekunyorera rekusiya basa (iro raunogona kurodha pasi repamutemo Social Security peji); kubvumidzwa kwekambani kana gwaro pazvinosimbiswa kuti uchaenderera mberi mukambani; gwaro rekuremara (kana iwe unaro) pamwe nekubvumidzwa kweMasoja Service kana kutsiva Rubatsiro rweMagariro (kana iwe unayo).
Zvakakosha Uyezve taura nekambani, nekuti zvinogona kunge zvisiri kuda kudzikisa basa revashandi uye muhoro, saka ichave iri imwe mamiriro ezvinhu: unogona kurasikirwa nebasa rako uye usasarudze kuzorora zvachose.
Ukangotanga maitiro, Kuchengetedzwa Kwemagariro kunotonga pane izvi uye iwe unogona kutanga kunakidzwa nekurega kwako chikamu paunenge uchiramba uchishanda. Ehezve, pakugamuchirwa kweiyo fomula zvakafanira kuti kambani isayine kondirakiti-yenguva. Zvikasadaro, zvinogona kurambwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Kusarura zvishoma
Chirevo chevagari venhaka: chii icho, zvazvinofanira kuitwa, zvakadii